Igumbi lokuzihombisa eline-ensuite elingana nenkosi enendawo yokupaka
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguDavid
Ndinegumbi elithandekayo, eline-covid-ekhuselekileyo, eline-en-suite lobukhulu begumbi lokungena endlini yam ecocekileyo, ephangaleleyo, negcinwe kakuhle enegesi esembindini yokufudumeza kunye ne-UPVC ephindwe kabini yokukhenkceza.
Ukhuseleko lwe-Covid luphunyezwa ngokunciphisa iindawo ekwabelwana ngazo kunye nomgaqo ongqongqo wokucoca. Indlu ikwiikhilomitha ezi-2 ukusuka kumbindi wesixeko. Igumbi li-en-suite kwaye lixhotyiswe ngefriji, i-microwave, i-hob, i-hairdryer kunye ne-Echo dot (i-Alexa). Ndingumntu ochubekileyo nowamkelayo umnini-ndlu oxabisa imfihlo yakhe yokhuseleko kwaye eyihloniphayo neyabanye.
Indawo ephangaleleyo, yabucala, igumbi lobukhulu obungasemva kwendlu kwaye lijonge emazantsi-ntshona phezu kwegadi. Umnyango unebholithi yokuqinisekisa ubumfihlo kwaye uqulethe i-sofa yesikhumba yokuthuthuzela okongeziweyo. Uya kuba nofikelelo olupheleleyo lwe-wifi (iinkcukacha eziboniswe kwisincamathelisi esincinci ngaphakathi komnyango).
Kukho i-intshi ye-28 ye-Sony Bravia TV kwigumbi kunye ne-Amazon Prime.
Kukho i-sofa, i-wardrobe, ifriji, i-microwave, i-hotplate kunye neti kunye nezixhobo zokwenza ikofu kwigumbi. Yiyo loo nto igumbi lizimele. Izibonelelo ekwabelwana ngazo kuphela ngumnyango wangaphambili, izitebhisi kunye nokuhla.
Igumbi lokuhlambela le-en-suite lineshawa yombane, isitya sokuhlambela, ikhabhathi kunye neWC. Iitawuli, ijeli yeshawa ibonelelwa.
Uya kuba nendawo yakho yokupaka esecaleni kwendlela esecaleni kwendlela phambi kwendlu.
28" HDTV ene-I-Amazon Prime Video, I-Fire TV
Isixhobo sokukhalisa umculo seEcho dot esine-aux
Le ndlu ikwindlela ezolileyo, enemithi. Akukho ndlela yokufikelela, ngoko ke nayiphi na itrafikhi ithintelwe kwabanye abahlali.
Kukho ipaki yelizwe ebanzi yemizuzu emi-5 ukuhamba kunye nesikhululo sebhasi, ivenkile yokutya yasekhaya kunye nentlanzi kunye nevenkile ye-chip ngaphakathi kwe-100 yeemitha okanye njalo.
I am semi-retired from my professional career in healthcare management. My hobbies include classic cars, flying light aircraft (when I can afford it!) and travelling to visit my 6 daughters and their families.
Ndihlala endlwini (negumbi lam lokuphumla labucala kunye negumbi lokuhlambela) ke ndiya kufumaneka ukukubonelela ngalo naluphi na uncedo onokulufuna. Njengomhlali waseLincoln ubomi bonke, ndingabonelela ngoncedo ngolwazi lwendawo kunye nesikhokelo.
Ndihlala endlwini (negumbi lam lokuphumla labucala kunye negumbi lokuhlambela) ke ndiya kufumaneka ukukubonelela ngalo naluphi na uncedo onokulufuna. Njengomhlali waseLincoln ubomi…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lincolnshire